Logitech Combo Touch, kiiboodhka ugu fiican iPad Pro | Wararka IPhone
Logitech Combo Touch, kiiboodhka ugu fiican iPad Pro
Luis Padilla | 04/08/2021 12:00 | iPad Pro, dhowr
Bilo badan ka dib anigoo adeegsanaya Keyboard -ka Magic -ka ee cajiibka ah ee Apple ee iPad Pro, waxay iila muuqatay wax aad iigu adag inaan isku dayo keyboard kale oo iga dhaadhicin kara wax badan, laakiin runtu waxay tahay in dhowr toddobaad ka dib aan isticmaalayo Logitech Combo Touch -ka cusub ee iPad Pro maalin kasta 12,9 "in kasta oo ay dhibeyso in la yiraahdo, hadda waxaan go'aansaday inaan ka tago Keyboard -ka Sixirka sanduuqiisa, waxaana kuu sheegayaa sababaha.
1 Naqshadeynta iyo qeexitaannada
2 Keyboard iyo Trackpad
Naqshadeynta iyo qeexitaannada
Kiiboodhka Logitech wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo si fiican loo kala saaray: daboolka dambe oo ka ilaalin doona iPad Pro -gaaga dhinac walba iyo xagga dambe, iyo kiiboodh sidoo kale ah daboolka hore ee kiiskaas. Labada qaybood waa kuwo madaxbannaan, waxaana lagu kala saari karaa si aad u weyn, maadaama ay ku biiraan birlab. Kaliya marka la isu soo dhaweeyo qayb kale, waxay si toos ah ugu biiri doonaan.
Waxay u ekaan kartaa wax aan muhiim ahayn, laakiin waa mid ka mid ah astaamaha aan aad ugu jeclahay kiiska keyboard-kan: waad isticmaali kartaa iPadkaaga bilaa keyboard, adigoon ka tanaasulin ilaalinta uu kiiska ku siiyo. Waxaad ka saari kartaa kiiboodhka ilbidhiqsi markaad rabtoXitaa waad rogi kartaa oo dhabarka u saari kartaa, si aad ugu qabato gacmahaaga. Markaad u baahan tahay kiiboodhka mar labaad, hal ilbidhiqsi oo ay diyaar u tahay inaad tagto.
Daboolka dambe wuxuu daboolayaa dhammaan dhinacyada iyo gadaasha ipad-ka, isagoo u dhaafaya godadka ku habboon kuwa ku hadla, makarafoonnada, kamaradda iyo isku xiraha USB-C ee kiniinka. Waa dhab godadkan kuwa ku hadla ee go'aaminaya inay la jaan qaadi karto oo keliya iPad Pro 12,9 ”2021 -ka cusub, qaababkii hore si fiican uma ay la jaan qaadi lahaayeen, in kasta oo haddii kale wax walba si fiican u shaqayn doonaan. Iyadoo la tixgelinayo inay tahay kii ugu horreeyey ee keyboard -ka trackpad ee Logitech ee loo sii daayo Apple -ka weyn ee iPad Pro, dhib yar ayaa laga yaabaa inaysan ku dhibin.
Daboolka hore iyo kan dambeba, iyo sidoo kale wax kasta oo ku xeeran furayaasha iyo trackpad -ka, waxaa lagu daboolay alaab dhar ah oo cawlan leh taabasho xoogaa adag, aad u wacan. Waa maaddo aad u adkaysi badan oo aad u fudud in la nadiifiyo. Waa qalab la mid ah kiiboodyada kale ee summaddu sidato, waxaanan ka xaqiijin karaa waayo -aragnimadayda inay si fiican u adkaysanayso marinka waqtiga. Dareenka taabashadu aad ayuu uga fiican yahay caaggii Keyboard -ka Sixirka, shaki la’aan.
Istaaggu wuxuu ku yaal dhabarka, fikrad aad u fiican maxaa yeelay habkaas uma baahnid gabal -kiiboodhka si aad u qabato iPad -ka, sida furayaasha kale. Waxay u oggolaanaysaa xagasha haynta ballaaran, laga bilaabo si qumman u qumman ilaa ku dhawaad ​​guri, ku habboon adeegsiga Qalinka Apple. Waxaa laga yaabaa inaanay dhalin kalsooni badan marka hore, maxaa yeelay waxay igu dhacday aniga oo leh kiiboodhkaygii ugu horreeyay ee leh nidaamkan, sidoo kale Logitech, laakiin aad bay uga adkaysi badan tahay sida ay u muuqato. Intaa waxaa dheer, qabashadu waa mid aad u deggan, oo aan shaashadda dhaqaaqin inta aad isticmaaleyso, xitaa haddii aad taabato shaashadda fartaada.
Si kastaba ha ahaatee, nidaamkani wuxuu leeyahay cillad u noqon karta dad badan: aad bay u dhib badan tahay, wax aan macquul ahaynna ma aha, in si toos ah loogu qoro iPadka lugahaaga. Si dhib leh uma isticmaalo iPad -ka sidan oo kale ah, laakiin haddii ay tahay habka aad doorbidayso isticmaalkeeda, waxaa fiican inaad hesho qalab dheeraad ah si aad awood ugu yeelatid inaad dhigto. Waxay sidoo kale ka dhigaysaa iPad -ka furaha furaha ah inuu qaato meel badan, oo aad uga badan Keyboard -ka Magic -ka. Kaamil ma aha.
Waxaan hilmaamay inaan ku daro in kiisku kuu oggolaanayo inaad dhigto Qalinka Apple meesha lagu dallaco, iyada oo loo marayo nidaamkeeda magnetic ee raaxada leh. Qaabkan Combo Touch kuma jiro daboolkii moodellada kale si loo xiro keyboard -ka loona daboolo Qalinka Apple, isagoo ka hortagaya inuu shil ku dhaco. Marka, sida Apple Keyboard Magic, aniga oo leh kiiboodhkaan sidoo kale waa inaan ka raadsadaa Qalinka Apple ee ku jira boorsadayda hoose Labadiiba saddex.
Waxaa jira hal shay oo kaliya oo aan u xiisay Keyboard-ka Sixirka: isku xirka USB-C. Waxaad siin kartaa iPad Pro-gaaga dib-u-soo-celin kara intaad ku xireyso qalab-ka USB-C ee iPad Pro. Laakiin ma aha wax weyn marka la eego madax-bannaanida dheer ee iPad Pro leeyahay.
Keyboard iyo Trackpad
Logitech waxay dooratay isku xiraha Smart si uu awood ugu yeesho Combo Touch. Tan micnaheedu waxaa weeye mahadnaqa isku xiraha birlabka yar ee ku yaal dhabarka iPad -ka ayaan u baahnaan doonin inaan dib u buuxinno kiiboodhka, mana aha inaan isticmaalno isku xirka Bluetooth. Wax walba waxay ku shaqeeyaan iyagoo wax walba dhigaya goobtiisa, iyada oo aan lahayn xiriir ama baytarro. Guul, gaar ahaan marka ay timaaddo keyboard -ka gadaal, kaas oo aan ognahay in baytariyadiisu caadi ahaan wax yar socdaan. Ilaa iyo inta uu iPad Pro -gaagu leeyahay batari, Combo Touch -kan wuu shaqayn doonaa.
Waa kiiboodh buuxa, oo leh cabbirka furaha caadiga ah (dhaldhalaal, hore ayaannu u sheegnay) iyo wadiiq -socod aad u weyn, oo ka weyn Keyboard -ka Sixirka. Furayaashu waa kuwo wax -qabad leh, oo leh safar ka yar kan keyboard -ka desktop -ka Logitech oo aad isku dayday, aad bay uga badan tahay furayaasha ku yaal Mac ama Keyboard -ka Magic laftiisa. Ma sheegi karo kala duwanaansho la dareemi karo marka aan teebabka wax ku qorayo. Iyo trackpad -ka si aad u wanaagsan ayaa loo sameeyay, mid ayaa oran lahaa waxaa soo saaray Apple lafteeda, maxaa yeelay waxay u shaqaysaa sida MacBook kasta. Waa farsamo, waxayna ka jawaabtaa furaha kasta, xitaa geesaha. Dabcan waa taabasho badan waxayna u oggolaanaysaa dhaqdhaqaaqyo la mid ah kii keyboard-ka Magic Keyboard-ka.
Oo halkan waxaa ka imanaya mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee kiiboodhkan: safka furayaasha shaqada ee ka sarreeya tirooyinka. Ma fahmin sida Apple aysan ugu soo bandhigin safkaas furayaasha kumbuyuutarkiisa, maxaa yeelay aad bay u xiiseen in markii ay si lama filaan ah kuu soo bandhigaan, aadan sii haysan karin la'aantii. Xakamaynta iftiinka shaashadda, raadiyaha, xakamaynta iftiinka dhabarka, dib -u -ciyaarida iyo xakamaynta mugga… Waxay xitaa leedahay furaha “guriga” iyo furaha lagu xiro iPad -ka.
Logitech wuxuu ka dhigay kumbuyuutarkiisa Combo Touch inuu si toos ah u istaago halka Keyboard -ka Magicku ku guuldareysto: ilaalinta iyo saf dheer oo furayaasha shaqada ah. Haddii tan aan ku darsanno in astaamaha intiisa kale ay la siman tahay keyboard -ka Apple, xaqiiqadu waxay tahay in “cilladaha” yar ee keyboard -kan aysan naga hor istaagi karin inaan dhahno waa, shaki la’aan, kiiboodhka ugu wanaagsan waxaa lagu iibsan karaa iPad Pro 12,9 ”. Qiimaheeda sidoo kale aad buu uga hooseeyaa Apple: € 229 si toos ah Dukaanka Apple (isku xirka).
Ku dhejiyay: 4 August 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 4 August 2021
Tayada agabka iyo
Kiiboodhka buuxa ee gadaal
Safka dheeraadka ah ee furayaasha shaqada
Ma jiro batari ama Bluetooth
Taabbad-taabasho badan oo leh jawaab-celin aad u fiican
Kiiska iyo kiiboodhka waa la kala saari karaa
Waxaa ka maqan xiriir USB-C dheeraad ah
Waxay qaadataa meel ka badan Keyboard -ka Magic
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Logitech Combo Touch, kiiboodhka ugu fiican iPad Pro
Apple wuxuu joojinayaa saxiixa iOS 14.7
Apple waa shirkadda ugu macaashka badan adduunka marka loo eego liiska Fortune Global 500